Laptop ရောင်းသည်/ဝယ်သည်/အလဲရသည် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ကြည့်သူအရေအတွက်: 104 (+1)
Gaming Laptop ဝယ်မလား?
Core I3 - I5 - I7 - Pentinum - celeron အစရှိသော
Used Laptop Brand Model အစုံဝယ်မလာ?
ဝယ်ချင်တာတွေ့ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ Comment ပေးရင်ကြာနေမှာစိုးလို့မဝယ်လိုက်ရပဲလွတ်သွားမှာစိုးလို့။
Ph - 09252619119 (Ygn)
Acer Aspire E5 575G 73W6
Intel hd graphic 6202gb
Core I7 6th
Amd Raedon Graphic R5 M335 2Gb
Intel hd Graphic 520 (2Gb)
Nividia GeForce 940M (2Gb)
Nividia geforce 920 2Gb
Intel hd graphic 4600 2gb
Hp pavilian 14 notebook pc
Amd radeon hd 8670M 2gb
Cote I3 5Th Gen
Intel hd graphic 5500 (2Gb)
Amd Radeon Graphic R5 M330 (2Gb)
Pentinum 4th gen
Intel hd Graphic 2Gb
Inel pentium N4200
Warranty 1 လကျန် ဘောက်ချာwarranty card ပါမယ်
Intel Celeron Cpu 3350
Display - 14
အမည်: Laptop ရောင်းသည်/ဝယ်သည်/အလဲရသည်